Ulwazi oluneenkcukacha malunga neempazamo ze-CHECKDB "Ubungakanani (# #: ##) kwisazisi sedatha # # siphawulwe sabelwa kwi-GAM, kodwa akukho SGAM okanye i-IAM iyabelwe."
Ikhaya iimveliso DataNumen SQL Recovery Impazamo ye-CHECKDB: Ubungakanani (##: ##) Kwi-Database Id ## Iphawulwe yabelwe kwi-Gam, kodwa akukho Sgam okanye i-Iam iye yabela yona
Ulwazi oluneenkcukacha malunga neempazamo ze-CHECKDB "eyandisiweyo (# #: ##) KwiDatabase Id # # Iphawulwe yaBiwa kwiGam, kodwa akukho Sgam okanye i-Iam eyabelwe yona"
Ukulungiswa: Ubungakanani (1: 296) buhanjisiwe bususwa kwinto yesazisi 0, isalathiso ID -1, isahlulelo se-ID 0, isabelo seyunithi ye-ID 0 (uhlobo olungaziwayo).
Ukulungiswa: Ubungakanani (1: 304) buhanjisiwe bususwa kwinto yesazisi 0, isalathiso ID -1, isahlulelo se-ID 0, isabelo seyunithi ye-ID 0 (uhlobo olungaziwayo).
Ukulungiswa: Ubungakanani (1: 312) buhanjisiwe bususwa kwinto yesazisi 0, isalathiso ID -1, isahlulelo se-ID 0, isabelo seyunithi ye-ID 0 (uhlobo olungaziwayo).
Ukulungiswa: Ubungakanani (1: 328) buhanjisiwe bususwa kwinto yesazisi 0, isalathiso ID -1, isahlulelo se-ID 0, isabelo seyunithi ye-ID 0 (uhlobo olungaziwayo).
Ukulungiswa: Ubungakanani (1: 360) buhanjisiwe bususwa kwinto yesazisi 0, isalathiso ID -1, isahlulelo se-ID 0, isabelo seyunithi ye-ID 0 (uhlobo olungaziwayo).
Ukulungiswa: Ubungakanani (1: 376) buhanjisiwe bususwa kwinto yesazisi 0, isalathiso ID -1, isahlulelo se-ID 0, isabelo seyunithi ye-ID 0 (uhlobo olungaziwayo).
Ukulungiswa: Ubungakanani (1: 384) buhanjisiwe bususwa kwinto yesazisi 0, isalathiso ID -1, isahlulelo se-ID 0, isabelo seyunithi ye-ID 0 (uhlobo olungaziwayo).
Ukulungiswa: Ubungakanani (1: 400) buhanjisiwe bususwa kwinto yesazisi 0, isalathiso ID -1, isahlulelo se-ID 0, isabelo seyunithi ye-ID 0 (uhlobo olungaziwayo).
Ukulungiswa: Iphepha (1: 285) lihanjisiwe ukusuka kwinto ye-ID 0, isalathiso -1, isahlulelo se-ID 0, isabelo secandelo le-ID 27021597764222976 (uhlobo olungaziwayo).
Ukulungiswa: Iphepha (1: 287) lihanjisiwe ukusuka kwinto ye-ID 0, isalathiso -1, isahlulelo se-ID 0, isabelo secandelo le-ID 27021597764222976 (uhlobo olungaziwayo).
Ukulungiswa: Iphepha (1: 289) lihanjisiwe ukusuka kwinto ye-ID 0, isalathiso -1, isahlulelo se-ID 0, isabelo secandelo le-ID 27021597764222976 (uhlobo olungaziwayo).
Ukulungiswa: Iphepha (1: 291) lihanjisiwe ukusuka kwinto ye-ID 0, isalathiso -1, isahlulelo se-ID 0, isabelo secandelo le-ID 27021597764222976 (uhlobo olungaziwayo).
Ukulungiswa: Iphepha (1: 293) lihanjisiwe ukusuka kwinto ye-ID 0, isalathiso -1, isahlulelo se-ID 0, isabelo secandelo le-ID 27021597764222976 (uhlobo olungaziwayo).
Ukulungiswa: Iphepha (1: 368) lihanjisiwe ukusuka kwinto ye-ID 0, isalathiso -1, isahlulelo se-ID 0, isabelo secandelo le-ID 27021597764222976 (uhlobo olungaziwayo).
Ukulungiswa: Iphepha (1: 283) lihanjisiwe ukusuka kwinto ye-ID 0, isalathiso -1, isahlulelo se-ID 0, isabelo secandelo le-ID 27021597770317824 (uhlobo olungaziwayo).
Nksg 8948, iNqanaba 16, i-State 3, i-Line 8
Impazamo kwindawo yogcino lwedatha: Iphepha (1: 284) liphawulwe ngohlobo olungalunganga kwiphepha le-PFS (1: 1). Isimo se-PFS 0x70 kulindeleke i-0x60.
Impazamo kwindawo yogcino lwedatha: Iphepha (1: 286) liphawulwe ngohlobo olungalunganga kwiphepha le-PFS (1: 1). Isimo se-PFS 0x70 kulindeleke i-0x60.
Impazamo kwindawo yogcino lwedatha: Iphepha (1: 288) liphawulwe ngohlobo olungalunganga kwiphepha le-PFS (1: 1). Isimo se-PFS 0x70 kulindeleke i-0x60.
Impazamo kwindawo yogcino lwedatha: Iphepha (1: 290) liphawulwe ngohlobo olungalunganga kwiphepha le-PFS (1: 1). Isimo se-PFS 0x70 kulindeleke i-0x60.
Impazamo kwindawo yogcino lwedatha: Iphepha (1: 292) liphawulwe ngohlobo olungalunganga kwiphepha le-PFS (1: 1). Isimo se-PFS 0x70 kulindeleke i-0x60.
Impazamo kwindawo yogcino lwedatha: Iphepha (1: 294) liphawulwe ngohlobo olungalunganga kwiphepha le-PFS (1: 1). Isimo se-PFS 0x70 kulindeleke i-0x60.
Impazamo kwindawo yogcino lwedatha: Iphepha (1: 295) liphawulwe ngohlobo olungalunganga kwiphepha le-PFS (1: 1). Isimo se-PFS 0x70 kulindeleke i-0x60.
Nksg 8905, iNqanaba 16, i-State 1, i-Line 8
Ububanzi (1: 296) kwiziko ledatha i-ID 39 iphawulwe yabelwa kwi-GAM, kodwa akukho SGAM okanye i-IAM iyabelwe.
Ububanzi (1: 304) kwiziko ledatha i-ID 39 iphawulwe yabelwa kwi-GAM, kodwa akukho SGAM okanye i-IAM iyabelwe.
Ububanzi (1: 312) kwiziko ledatha i-ID 39 iphawulwe yabelwa kwi-GAM, kodwa akukho SGAM okanye i-IAM iyabelwe.
Ububanzi (1: 328) kwiziko ledatha i-ID 39 iphawulwe yabelwa kwi-GAM, kodwa akukho SGAM okanye i-IAM iyabelwe.
Ububanzi (1: 360) kwiziko ledatha i-ID 39 iphawulwe yabelwa kwi-GAM, kodwa akukho SGAM okanye i-IAM iyabelwe.
Nksg 8928, iNqanaba 16, i-State 6, i-Line 8
I-ID yento 0, isalathiso se-ID-1, isahlulelo se-ID 0, isabelo seyunithi ye-ID 0 (uhlobo olungaziwayo): Ikhasi (1: 368) alinakwenziwa. Bona ezinye iimpazamo ngeenkcukacha.
Ububanzi (1: 376) kwiziko ledatha i-ID 39 iphawulwe yabelwa kwi-GAM, kodwa akukho SGAM okanye i-IAM iyabelwe.
Ububanzi (1: 384) kwiziko ledatha i-ID 39 iphawulwe yabelwa kwi-GAM, kodwa akukho SGAM okanye i-IAM iyabelwe.
Ububanzi (1: 400) kwiziko ledatha i-ID 39 iphawulwe yabelwa kwi-GAM, kodwa akukho SGAM okanye i-IAM iyabelwe.
Nksg 8909, iNqanaba 16, i-State 1, i-Line 8
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 281475001417728 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 376) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (70: 34).
Nksg 8906, iNqanaba 16, i-State 1, i-Line 8
Ikhasi (1: 284) kwiziko ledatha i-ID 39 yabelwe kwi-SGAM (1: 3) nakwi-PFS (1: 1), kodwa ayabelwa nayiphi na i-IAM. Iiflegi ze-PFS 'IAM_PG MIXED_EXT ZONKE EZENZIWEYO 0_PCT_FULL'.
Ikhasi (1: 285) kwiziko ledatha i-ID 39 yabelwe kwi-SGAM (1: 3) nakwi-PFS (1: 1), kodwa ayabelwa nayiphi na i-IAM. Iiflegi ze-PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597764222976 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 285) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (8074: 44).
Ikhasi (1: 286) kwiziko ledatha i-ID 39 yabelwe kwi-SGAM (1: 3) nakwi-PFS (1: 1), kodwa ayabelwa nayiphi na i-IAM. Iiflegi ze-PFS 'IAM_PG MIXED_EXT ZONKE EZENZIWEYO 0_PCT_FULL'.
Ikhasi (1: 287) kwiziko ledatha i-ID 39 yabelwe kwi-SGAM (1: 3) nakwi-PFS (1: 1), kodwa ayabelwa nayiphi na i-IAM. Iiflegi ze-PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597764222976 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 287) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (7620: 27).
Ikhasi (1: 288) kwiziko ledatha i-ID 39 yabelwe kwi-SGAM (1: 3) nakwi-PFS (1: 1), kodwa ayabelwa nayiphi na i-IAM. Iiflegi ze-PFS 'IAM_PG MIXED_EXT ZONKE EZENZIWEYO 0_PCT_FULL'.
Ikhasi (1: 289) kwiziko ledatha i-ID 39 yabelwe kwi-SGAM (1: 3) nakwi-PFS (1: 1), kodwa ayabelwa nayiphi na i-IAM. Iiflegi ze-PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597764222976 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 289) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (8053: 29).
Ikhasi (1: 290) kwiziko ledatha i-ID 39 yabelwe kwi-SGAM (1: 3) nakwi-PFS (1: 1), kodwa ayabelwa nayiphi na i-IAM. Iiflegi ze-PFS 'IAM_PG MIXED_EXT ZONKE EZENZIWEYO 0_PCT_FULL'.
Ikhasi (1: 291) kwiziko ledatha i-ID 39 yabelwe kwi-SGAM (1: 3) nakwi-PFS (1: 1), kodwa ayabelwa nayiphi na i-IAM. Iiflegi ze-PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597764222976 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 291) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (7098: 50).
Ikhasi (1: 292) kwiziko ledatha i-ID 39 yabelwe kwi-SGAM (1: 3) nakwi-PFS (1: 1), kodwa ayabelwa nayiphi na i-IAM. Iiflegi ze-PFS 'IAM_PG MIXED_EXT ZONKE EZENZIWEYO 0_PCT_FULL'.
Ikhasi (1: 293) kwiziko ledatha i-ID 39 yabelwe kwi-SGAM (1: 3) nakwi-PFS (1: 1), kodwa ayabelwa nayiphi na i-IAM. Iiflegi ze-PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597764222976 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 293) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (7098: 50).
Ikhasi (1: 294) kwiziko ledatha i-ID 39 yabelwe kwi-SGAM (1: 3) nakwi-PFS (1: 1), kodwa ayabelwa nayiphi na i-IAM. Iiflegi ze-PFS 'IAM_PG MIXED_EXT ZONKE EZENZIWEYO 0_PCT_FULL'.
Ikhasi (1: 295) kwiziko ledatha i-ID 39 yabelwe kwi-SGAM (1: 3) nakwi-PFS (1: 1), kodwa ayabelwa nayiphi na i-IAM. Iiflegi ze-PFS 'IAM_PG MIXED_EXT ZONKE EZENZIWEYO 0_PCT_FULL'.
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597764222976 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 313) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (7220: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597764222976 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 328) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (6846: 34).
Ikhasi (1: 368) kwiziko ledatha i-ID 39 yabelwe kwi-SGAM (1: 3) nakwi-PFS (1: 1), kodwa ayabelwa nayiphi na i-IAM. Iiflegi ze-PFS 'IAM_PG MIXED_EXT ZONKE EZENZIWEYO 0_PCT_FULL'.
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597764222976 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 368) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (6: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597764222976 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 385) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (7074: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597764222976 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 400) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (6818: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597769400320 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 296) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (4044: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597769465856 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 384) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (4076: 34).
Ikhasi (1: 283) kwiziko ledatha i-ID 39 yabelwe kwi-SGAM (1: 3) nakwi-PFS (1: 1), kodwa ayabelwa nayiphi na i-IAM. Iiflegi ze-PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597770317824 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 283) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (3374: 54).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597783752704 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 297) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (10: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597783818240 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 298) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (18: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597783883776 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 299) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (42: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597783949312 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 300) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (14: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597784014848 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 301) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (14: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597784080384 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 302) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (32: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597784145920 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 303) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (56: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597784211456 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 304) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (34: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597784276992 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 305) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (30: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597784342528 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 306) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (10: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597784408064 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 307) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (98: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597784473600 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 308) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (34: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597784539136 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 309) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (20: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597784604672 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 310) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (38: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597784670208 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 311) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (30: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597784735744 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 312) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (32: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597787881472 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 360) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (24: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597787947008 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 361) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (6: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597788012544 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 362) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (30: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597788078080 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 363) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (60: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597788143616 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 364) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (36: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597788209152 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 365) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (8: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597788274688 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 366) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (50: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597788864512 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 367) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (24: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597788995584 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 377) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (34: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597789061120 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 378) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (52: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597789126656 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 379) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (90: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597789192192 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 380) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (34: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597789257728 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 381) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (52: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597789323264 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 382) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (76: 34).
Impazamo yeTafile: I-ID yento 0, isalathiso -1, isahlulo ID 0, isabelo se-ID 27021597789388800 (uhlobo olungaziwayo), i-ID yephepha (1: 383) iqulethe i-ID engachanekanga kwiphepha layo. IphephaId kwiphepha lasentloko = (16: 34).
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo-31 kunye neempazamo ezi-44 zokungaguquguquki ezingahambelani nayo nayiphi na into.
I-CHECKDB ilungelelanise iimpazamo zolwabiwo-31 kunye neempazamo ezingama-0 zokungaguquguquki ezingahambelani nayo nayiphi na into.
Ukulungiswa: ikhonkco le-IAM le-ID yento 27, isalathiso se-ID 2, isahlulelo se-ID 562949955190784, isabelo secandelo le-ID 562949955190784 (uhlobo lwedatha emgceni), incitshisiwe phambi kwephepha (1: 288) kwaye iza kwakhiwa kwakhona.
Nksg 2575, iNqanaba 16, i-State 1, i-Line 8
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 288) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 27, isalathiso ID 2, isahlulelo se-ID 562949955190784, ulwahlulo lweeyunithi ID 562949955190784 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo ezi-1 kunye neempazamo ezi-0 ezingaguquguqukiyo kwitafile 'ii-syssersers' (i-ID yento 27).
I-CHECKDB ilungelelanise iimpazamo zolwabiwo-1 kunye neempazamo ezi-0 ezingaguquguqukiyo kwitafile 'ii-syssersers' (i-ID yento 27).
Ukulungiswa: Iphepha (1:79) labelwe into ye-ID 34, isalathiso ID 2, isahlulelo ID 562949955649536, isabelo secandelo ID 562949955649536 (chwetheza idatha kumqolo).
Ukulungiswa: ikhonkco le-IAM le-ID yento 34, isalathiso se-ID 2, isahlulelo se-ID 562949955649536, isabelo secandelo le-ID 562949955649536 (uhlobo lwedatha emgceni), incitshisiwe phambi kwephepha (1: 295) kwaye iza kwakhiwa kwakhona.
Ukulungiswa: Iphepha (1:80) labelwe into ye-ID 34, isalathiso ID 3, isahlulelo ID 844424932360192, isabelo secandelo ID 844424932360192 (chwetheza idatha kumqolo).
Ukulungiswa: ikhonkco le-IAM le-ID yento 34, isalathiso se-ID 3, isahlulelo se-ID 844424932360192, isabelo secandelo le-ID 844424932360192 (uhlobo lwedatha emgceni), incitshisiwe phambi kwephepha (1: 368) kwaye iza kwakhiwa kwakhona.
Ikhasi (1: 79) kwiziko ledatha i-ID 39 yabelwe kwi-SGAM (1: 3) nakwi-PFS (1: 1), kodwa ayabelwa nayiphi na i-IAM. Iiflegi ze-PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 295) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 34, isalathiso ID 2, isahlulelo se-ID 562949955649536, ulwahlulo lweeyunithi ID 562949955649536 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
Ikhasi (1: 80) kwiziko ledatha i-ID 39 yabelwe kwi-SGAM (1: 3) nakwi-PFS (1: 1), kodwa ayabelwa nayiphi na i-IAM. Iiflegi ze-PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Imephu yolwabiwo lwe-Index (IAM) iphepha (1: 368) ikhonjwe sisalathiso esilandelayo sephepha le-IAM (0: 0) kwinto ye-ID 34, isalathiso ID 3, isahlulelo se-ID 844424932360192, ulwahlulo lweeyunithi ID 844424932360192 (uhlobo kumqolo data), kodwa ayifumanekanga kwiskeni.
SQL Server Ndifumene impazamo ye-I / O esekwe kulungelelwaniso olusebenzayo: iphepha elingachanekanga (kulindeleke 1: 261; eyi-114: 34). Kwenzekile ngexesha lokufundwa kwephepha (1: 261) kwindawo yesazisi ID 39 kwi-offset 0x0000000020a000 kwifayile 'C: Inkqubo yeefayile SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Imiyalezo eyongezelelweyo kwifayile ye- SQL Server ilog yempazamo okanye inkqubo yomcimbi wokungena inokubonelela ngeenkcukacha ezithe kratya. Le yimeko yeempazamo enkulu esongela isiseko sedatha kwaye kufuneka ilungiswe kwangoko. Gcwalisa isiseko esigcweleyo sokungqinisisa (DBCC CHECKDB). Impazamo inokubangelwa zizinto ezininzi; ngolwazi oluthe kratya, bona SQL Server Iincwadi ezikwi-Intanethi.
SQL Server Ndifumene impazamo ye-I / O esekwe kulungelelwaniso olusebenzayo: iphepha elingachanekanga (kulindeleke 1: 369; eyona nto iyi-40: 60). Kwenzekile ngexesha lokufundwa kwephepha (1: 369) kwindawo yesazisi ID 39 kwi-offset 0x000000002e2000 kwifayile 'C: Iifayile zeNkqubo SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Imiyalezo eyongezelelweyo kwifayile ye- SQL Server ilog yempazamo okanye inkqubo yomcimbi wokungena inokubonelela ngeenkcukacha ezithe kratya. Le yimeko yeempazamo enkulu esongela isiseko sedatha kwaye kufuneka ilungiswe kwangoko. Gcwalisa isiseko esigcweleyo sokungqinisisa (DBCC CHECKDB). Impazamo inokubangelwa zizinto ezininzi; ngolwazi oluthe kratya, bona SQL Server Iincwadi ezikwi-Intanethi.
UMsg 8905 ibonisa ubungakanani obabelwe i-GAM, kodwa akukho SGAM okanye i-IAM eyabelweyo. Le yimpazamo yolwabiwo.
Kwiziko ledatha le-MDF, idatha igcinwa njenge Maphepha. I-GAM, i-SGAM kunye ne-IAM zonke zisetyenziselwa ulwabiwo. Kwaye idatha yabelwe iyunithi yobungakanani (iphepha eli-8) endaweni yephepha elinye ukuphucula ukusebenza. Ukuba umda wabelwe i-GAM kodwa ungabiwanga yi-SGAM okanye i-IAM, i-CHECKDB iya kunika ingxelo UMsg 8905, Emva koko uzame ukuyilungisa.
Isampulu iifayile ze-MDF ezonakeleyo apho I-CHECKDB UKULUNGISA_ALLOW_DATA_LOSS uya kufumana UMsg 8905 Impazamo, kodwa UNGAKHO ukubuyisa isiseko sedatha, ngelixa DataNumen SQL Recovery unako.
SQL Server 2014 Impazamo11.mdf Impazamo11_fixed.mdf